५० प्रतिशत् ठुला अप्रेसन कर्णाली प्रदेश अस्पताल मै, राजनीति हाबी हुँदा समस्या (हेर्नुस भिडियो) – HostKhabar ::
५० प्रतिशत् ठुला अप्रेसन कर्णाली प्रदेश अस्पताल मै, राजनीति हाबी हुँदा समस्या (हेर्नुस भिडियो)
प्रमुख कन्सलटेन्ट गाइनोलोजिस्ट डा. केशर ढकाल सम्मानित
सुर्खेत : प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ५० प्रतिशत् ठुला (मेजर) अप्रेसन सेवामा बृद्धी भएको प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले बताएका छन् ।
प्रदेश अस्पतालको १५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमा प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्दै र्निदेशक डा. खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश अस्पतालमा बिगतको तुलनामा बिरामीको संख्यामा बृद्धि भएको उनको भनाई छ । सिटि स्क्यान २९ सय रुपैयाँ मा नै सेवा दिइएको र गत बर्षको तुलनामा दोब्बरका दरले जनताले सेवा पाएको उनले जानकारी दिए । सेवामा निरन्तर रुपमा खटिने कर्मचारीहरुले कोरोना भत्ता र श्रावण देखि यता तलब खान चाँही नपाएको उनले दुखेसो पोखे ।
प्रदेश अस्पतालमा बिरामीले निरन्तर सेवा पाईरहेको तर केहि ब्यक्तिका कारणले बजेट कार्यन्वयनमा समस्या भएको उनले बताए । अस्पतालको बिकासका लागी आफु लागी परेता पनि ब्यक्तिगत स्वार्थका लागी राजनितिक चलखेल हुने गरेको उनको भनाई छ । कुनै एक ब्यक्तीका कारण प्रदेश अस्पतालको बिकासमा अवरोध आएको डाक्टर खड्काले बताए । त्यस्तै कर्मचारीको पनि अभाव भएको उनको भनाई छ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवंम भूमी व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने बताएकी छन् । प्रदेश अस्पताको १५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रमलाई सम्बोदन गर्दै मन्त्री केसीले प्रदेश अस्पतालको सेवा प्रवाहमा गतल गतिबिधि हुन नदिने उनको भनाई छ । गलत गतिबिधिका बिरुद्ध सबैलाई एक हुन आग्रह गर्दै मन्त्री केसीले स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रमा खेलभाड गर्ने अधिकार कसैलाइ नभएको बताईन् । बिरामिका लागी अस्पतालले विश्वसनियाता सेवा दिन सक्नु पर्ने उनले बताईन् ।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासमा लागीपरेको, अस्पताल पनि पुर्ण नागरिकको आकर्षको केन्द्र बन्नु पर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री केसीले सामान्य सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने कर्णालीको स्थिती स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथामिक्तामा राखेको बताईन ।
सेवा प्रबाहलाई थप प्रभावकारी बनाएर प्रविधीमैत्री बनाउँनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरलाल रेग्मीले बताएका छन् । अन्य प्रदेशमा जाने बिरामीलाई पनि कर्णालीमा आकर्षण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । वीरेन्द्रनगरका नगरप्रमुख देबकुमार सुबेदीले प्रदेश अस्पतालले एउटा उचाइ कायम गरेकोे भन्दै कोरोना महामारीको बेला प्रदेश अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेकोे बताए ।
अस्पतालले भौतिक क्षेत्रको विकासमा उचाई कायम गरेको भन्दै उनले सेवा प्रबाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । सरसफाइ कर्मचारी मिना चौधरी, सहायक स्तर तर्फ सविता योगी र अधिकृत स्तर तर्फ, प्रमुख कन्सलटेन्ट गाइनोलोजिस्ट डा. केशर ढकाललाई सम्मान गरेको हो ।